Ikhalenda Lunar 2018 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba sazi, inyanga yethu inomjikelezo wezinsuku ezingama-28 ophelele. Le satellite idlula ezigabeni ezine njengoba lezi zinsuku zihamba. Izigaba ezaziwayo yilezi: ezintsha, ezikhulayo, ezigcwele futhi eziya ngokuncipha. Namuhla sizokukhombisa ifayili le- Ikhalenda lezinyanga ezingama-2018 ngakho konke ukusitheka kwelanga, izimpawu nokunye ukutolikwa kwezinkanyezi. Sizoqala ukuchaza ikhalenda yenyanga kaMeyi esikuyo futhi sizoya kuze kube nguDisemba.
Ngabe ufuna ukwazi usuku lwazo zonke izigaba zenyanga kanye nencazelo yalo? Qhubeka ufunde 🙂
1 Inyanga ngoMeyi
2 Inyanga ngoJuni
3 Inyanga ngoJulayi
4 Inyanga ngo-Agasti
5 Inyanga ngoSepthemba
6 Inyanga ngo-okthoba
7 Inyanga ngonovemba
8 Inyanga ngodisemba
Kulenyanga kaMeyi esibe nayo inyanga yokugcina yekota yokugcina ngoMeyi 7 nenyanga entsha ngoMeyi 15. Kule nyanga, inyanga isilethela amandla anele okwenza ezinye izakhiwo, ezomnotho, ezomndeni noma zokwakha. Ukuqala ukuzivocavoca kuyindlela enhle kakhulu kulezi zinsuku ngakho-ke asibhekani nokucindezeleka ngokweqile.
Ikota yokuqala izovela ngoMeyi 22 bese kuthi ekugcineni kugcine inyanga egcwele ngoMeyi 29. Uphawu yiSagittarius futhi lusikhombisa injabulo nentshiseko ekupheleni kwenyanga. Akungabazeki futhi ukuthembela okumsulwa yizinto ezizohambisana nathi. Lapho siphana kuzo zonke izenzo usuku lonke, sithola ukhiye wesifuba senala. Usuku lwenyanga egcwele luyindlela enhle yokuhlelela umsebenzi wezemidlalo.
Ngenyanga kaJuni, amazinga okushisa aphezulu nokuqala kwe-solstice yasehlobo afika ngokuya ngokuya. Sizoba no-eIkota yokugcina ngoJuni 5 nenyanga entsha ngoJuni 13. Isibonakaliso iGemini. Amasu asetshenziswa kwezokuxhumana angasisiza ukuthi sifinyelele abanye abantu futhi sizikhombise njengoba sinjalo. Kufanele sizihlole ngokucophelela izimo esikuzo futhi sifunde izilimi noma siqale izifundo ezintsha. Le nyanga isilungele ukuthatha izinto ngamahlaya.
Ngakolunye uhlangothi, sizoba nayo ikota yokuqala ngoJuni 20 nenyanga egcwele ngoJuni 28. Uphawu yiCapricorn. Inyanga kulezi zinsuku iyakha ngokwengeziwe, iyasebenza, iyagxila futhi inikelwe. Wonke amandla onawo wokubhekana nezinkinga nokuzixazulula ayancipha. Ungashiyi umsebenzi usuqedile. Umhlaba wakho ongokomzwelo uzomiswa ngandlela thile.
Maphakathi nehlobo, inyanga yamaholide kwabaningi, sizoba nekota yokugcina ngoJulayi 4 nenyanga entsha ngomhlaka 12. Sizoba nokusitheka kwelanga ngokwengxenye kusibonakaliso seCancer. Lezi zinsuku zingaba nzima kakhulu kwabanye. Kubalulekile ukuzazi thina nokuthi sazi ukuthi singobani nokuthi yini esiyifunayo. Isimo sethu esiyinhloko singasenza sizazise futhi sibone ukuthi izinto ebesicabanga ukuthi bezingezethu. Kubaluleke kakhulu ukwethembeka kuwe futhi konke okungaqukethe thina kuzovala isigaba empilweni yethu.
El UCrescent sizoba nawo ngoJulayi 19 nenyanga egcwele ngoJulayi 27, kuhambisana nokusitheka okuphelele kwenyanga ku-Aquarius. Lezi zinsuku nazo zizoshuba kakhulu. Imibuzo eyisisekelo kufanele isiholele ukuthi siwele lowo mkhawulo wenkululeko. Singazithola sinezintshisekelo ezahlukahlukene, uthando oluvulekile ngokwengeziwe nomuzwa wokukhululeka okukhulu. Singanqanyulwa kakhulu kunokujwayelekile, ngokomzimba nangokwengqondo. Lokhu kujwayelekile endaweni eshisayo, eholidini, futhi ethule.
El Ikota yokugcina izoba ngo-Agasti 2 kanti inyanga izonetha ngomhla ka-11 Agasti ngokusitheka kwelanga ngokwengxenye. Isibonakaliso nguLeo. Lezi zinsuku ngeke sizuze lutho ngaphandle kokusebenzisa isibindi nokuzimela ezintweni ezithile. Lokho abasitshela khona endaweni yethu ngeke kusize ekwenzeni izinqumo ezibalulekile.
El Ikota lokuxhuma lizofika ngo-Agasti 17 nenyanga egcwele ngo-26 kusibonakaliso sePisces. Kulezi zikhathi, iphupho, amaphupho kanye nokuqonda kusisiza ukuthi siqhubeke usuku ngalunye. Futhi ukweqisa nezidakamizwa kungakunikeza ukukhishwa okuphoqelelwe. Kugweme. Kulezi zinsuku ezishisayo singasondela ekukhohlisweni noma ekusetshenzisweni. Kodwa-ke, singakugwema lokhu uma sithinta abantu abasitshela ukuthi siyakhohliswa noma sikhohlisiwe. Zisebenzise lezi zinsuku ngoba uzozwelana nabanye futhi abe nobuciko.
Kule nyanga kuzokwenzeka ikota yokugcina ngomhlaka 1 nenyanga entsha ngomhlaka 9 kusibonakaliso seVirgo. USepthemba uhambisana nenqubo ejwayelekile, ukucindezeleka, ukuhlukumezeka kwangemva kweholide, njll. Lo mkhuba ungalungiswa ngokwenza ukulungisa okuncane. Uma si-oda kokuncane kakhulu, singaba nokuthula kokukhulu. Kuningi okumele ukwenze ukuze udideke ngengqondo.
El ikota yokuqala izoba mhlaka 16 nenyanga egcwele ngomhlaka 25 kusibonakaliso sama-Aries. Isimo sezulu sizoba sesenzo, isinyathelo kanye nokuzimela. Kulezi zinsuku kuzofanele sithuthe futhi kuzolunga ukuqala izinto. Kungenzeka kube nesimo esithile sodlame. Ukuziqeda, kungcono ukuzijwayeza ezemidlalo ngaphandle.
Ngo-Okthoba amazinga okushisa aqala ukwehla bese sibingelela ekwindla. Inyanga enciphileyo izofika ngo-Okthoba 2 bese uyigcwalisa ngo-9 kusibonakaliso seLibra. Singaba nokuthandana noma ukukhohlisa. Umkhuba wakho ungagcwaliswa ngezenzo ezijabulisayo.
El Ikota yokuqala izoba ngo-Okthoba 15 nenyanga ephelele ngo-Okthoba 24. kusibonakaliso seTaurus. Inyanga esizoba nayo kulezi zinsuku izoba nenjabulo enkulu kanye nenkanuko. Izinkinga ezibalulekile ziyafaneleka, zombili maqondana nokudla, ukuphumula nezidingo zezimali. Sizofuna ukwenza esikufunayo futhi sibe nezinto ezihlanyayo.
Ikota yokugcina izoba ngo-Okthoba 30.
Inyanga entsha iyangena ngenyanga kaNovemba ngomhlaka 7 kusibonakaliso seScorpio. Kuzoba namandla endleleni futhi ukwesaba kwethu kuzokhula. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi yimiphi imizwa ecijile.
El ikota yokuqala izoba mhlaka 14 nenyanga egcwele ngomhlaka 23 kusibonakaliso iGemini. Konke obekuthule ngaso sonke isikhathi, nale nyanga kudedela. Izikweletu esinazo nabayeni, abathandi, abangane, njll. Kumele zixazululwe.
Ikota yokugcina ngeyama-29.
Sivala unyaka nge inyanga entsha ngodisemba 7 kusibonakaliso se-Sagittarius. Yisikhathi lapho singabeka khona engcupheni ngoba sizoba nokuzethemba namandla. Singazinqoba izimpi.
El ikota yokuqala izoba mhlaka 13 nenyanga egcwele ngomhlaka 22 kusibonakaliso Umdlavuza. Kuzoba nokushintsha kwemizwelo kube yinyanga yamanzi. Sizozizwa silimele, sizwela futhi sizoba namandla amaningi okuxhumana nokubonisa uthando. Kufanele ukhulise izinga lomuzwa.
Ikota yokugcina ngeyama-28.
Ngalolu lwazi uzokwazi ukujabulela inyanga kuzo zonke izigaba zayo unyaka wonke wezi-2018.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Ikhalenda Lunar 2018